Gịnị na-eme n'ụbụrụ anyị mgbe anyị na-enwe mmekọahụ? - AHUIKE KWURU MAG - TELES Relay
Mmekọahụ nwere ike ịbụ ihe ịtụgharị uche nke mmụọ na ọ nwere ike bụrụ ihe mgbagwoju anya nye ụfọdụ. Obi uto, ihe ndi mmadu, mmeghari nke ihe na-adighi nma na ntinye aka na-akwalite ịrị elu nke orgasm ma mee ka mmekorita nke nwoke ghara ichefu. Iji ghọtakwuo ihe na-aga n'ụbụrụ gị n'oge mmekọahụ, Dr. Jamin Brahmbhatt, ọkà mmụta urologist na ọkachamara na ahụ ike mmekọahụ, na-enyere anyị aka ịghọta isiokwu a.
Kachasị mma ịghọta ahụ gị iji kwalite obi ụtọ
Mmekọahụ nwere ike inwe mmetụta na ahụ, kamakwa na ụbụrụ. Ọ bụrụgodị na i chere na ọ bụ naanị ihe na-agụ gị agụụ ka ihe na-agụ gị agụụ, mmekọahụ na-emetụta akwara ozi ma na-ebute ntọhapụ nke endorphins n'ụbụrụ. N'ikwu eziokwu, mmetụta ị nwere ike ịnwe nwere ike ikwu na kemịkal na usoro ndu nke ụbụrụ gị. "Mmekọahụ dị mma" maka ahụike na ahụike, na-echeta ọkà mmụta urologist Jamin Brahmbhatt tupu ya agbakwunye na "ịmara ihe na-eme ahụ gị na ụbụrụ gị tupu, n'oge na mgbe ị nwesịrị inwe mmekọahụ nwere ike ime ka mmekọahụ nwee ịtụnanya".
Na ezi ihe kpatara ya, mgbe ị na-abanye na ahụ gị, ọ na-enye gị ohere ịnweta mmekọahụ gị n'ụzọ dị jụụ na nke nwere onwe karị, na ịghọta mmetụta gị mgbe ị na-aghọta usoro dị iche iche na-enye aka na ya. Na mgbakwunye, ọ na-enyere aka ịmatakwu ọchịchọ ya na ọkwa mmekọahụ na ịkọwapụta ya n'ụzọ zuru oke. Ọtụtụ mgbe, understandingghọta ahụ gị na ọchịchọ obi ya na-akwalite nkwurịta okwu n'etiti ndị mmekọ abụọ ma na - arụpụta mmeghachi omume mmekọahụ. Ya mere, site n'ịghọta ihe ị na-atụ anya na mkpa gị, ị nwere ike ịbawanye obi ụtọ ị na-enwe n'oge mmekọahụ wee rute orgasm ngwa ngwa. Kedu ihe na - eme n’etiti egwuregwu na orgasm? Anyị na-agwa gị ihe niile.
Ihe na-eme n'ụbụrụ n'oge mmekọahụ
Dị ka ọtụtụ ọmụmụ, 75% nke ụmụ nwanyị nwere nsogbu na-enwe orgasm mgbe mmamiri penetration na 10 ka 15% anaghị achịkwa iji nweta ọ enjoyụ mmekọahụ n'oge omume ahụ. Womenfọdụ ụmụ nwanyị na-atụle nke ahụ orgasm vaginal bu akuko ifo na ọ bụ naanị orgasm nke clitoral nwere ike inye obi ụtọ dị ukwuu. Otú ọ dị, o doro anya na nwanyị ọ bụla dị iche ma nwee ike inwe ụdị obi ụtọ dị iche na-adabere na mkpali nke ikpu ya, ma ọ bụ ọnya ya. “Have nwere ọchịchọ ebumpụta ụwa inwe mmekọahụ, nke a na-akpata mgbanwe mgbanwe mmiri nke na-eme n’ime ahụ gị,” ka urologist ahụ na-ekwu. Ọ na-akọwa na n'ime ụmụ nwoke, ọ bụ testosterone na-akwalite agụụ mmekọahụ n'ime ụmụ nwanyị, agụụ mmekọahụ na-adị mgbagwoju anya iji nyochaa. Tụkwasị na nke ahụ, ọkachamara ahụ na-akọwa na ọmụmụ MRI na-egosi ọrụ ka ukwuu na mpaghara ụfọdụ nke ụbụrụ tupu enwe mmekọahụ, karịsịa usoro mkpụrụ akụkụ nke na-akpata mmetụta uche. Dr Brahmbhatt na-ekwu, "Akụkụ ụbụrụ a bụ maka ncheta, ụjọ, iwe ọgụ na mmetụta ndị ọzọ." "Gụnyere na mmekọahụ na-ebukwa nzuzo nzuzo nke dopamine (ihe ndị dị ndụ na-ahụ maka ihe ụtọ), ọ na-ewepụta mmeghachi omume yiri nke ị nwere mgbe ị na-eri nri kachasị amasị gị, mgbe ị na-egwu egwu, mgbe a na-eto gị ma ọ bụ mgbe ị na-ege egwu ọkacha mmasị gị, ”ka ọkachamara ahụ na-akọ. Ya mere, inwe mmekọahụ na-enweta ahụmịhe nke na-ahụkarị na ụgwọ ọrụ ka ukwuu, ka ụbụrụ ụbụrụ na-ebuwanye ibu na ihe anyị chọrọ karịa.
N'ime ụmụ nwanyị, mmanu nke mgbidi nwanyị na ọfụma nke nwanyị na-eme ka agụụ nwee ume. Obi na-agba ọsọ na-agbapụta ọbara ngwa ngwa, na-eme ka ọbara mgbali elu na iku ume ngwa ngwa. Mgbe ahụ ụmụ nwanyị nwere ike ịnụ ụtọ agụụ mmekọahụ n'ụzọ zuru oke. Otú ọ dị, ọ bụ ezie na ụfọdụ na-eduga agụụ mmekọahụ ngwa ngwa, ọ nwere ike iwe ogologo oge maka ndị ọzọ. “Enwere mmụba n'ọbara na-ebute site na njupụta nke nitric oxide na ahụ gị n'oge mmekọahụ", ọkachamara ahụ kọwara tupu ọ gaa n'ihu "ọ bụ ya mere ị ji chọpụta na akụkụ ụfọdụ nke ahụ gị na-acha ọbara ọbara, ọ bụkwa ya mere ara gị ji enwe mmetụta karị na fụrụ akpụ ”.
Ka ihe obi ụtọ na-abawanye, otú ahụ ka usu, ọbara mgbali elu, iku ume na secretion nke dopamine na adrenaline na-abawanye. Ka ị na-eru nso orgasm, uru ahụ dị na ahụ gị na-agbasie ike n'ihi mgbanwe nke ụbụrụ gị. Na mgbakwunye, urologist na-akọwa na mmekọahụ na-ewusi usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ, na-eme ka obi sie gị ike na ihe okike. N'ezie, dị ka a ọmụmụ site na Mahadum Wilkes, ndị na-enwe mmekọahụ otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ n'izu na-ahụ 30% mmụba na immunoglobulin A, nke bụ maka mgbochi. Na mgbakwunye, “mmekọahụ na ntụgharị uche na-enyere aka inwe mmetụta dị n’etiti onwe gị na ụwa gbara gị gburugburu, a na-eme ka nghọta gị sikwuo ike, ị na-enwekwu ihe okike ma nwee ike idozi nsogbu na obi dị jụụ”, na-egosi Kim Anami, ọkachamara zuru oke ọkachamara na mmekọahụ .
Mgbe ị ruru orgasm, hypothalamus na-agabiga oke oke, na-akwadebe ahụ maka ọnọdụ ọdịmma aDr Brahmbhatt na-ekwu. Gbaso orgasm ahụ, enwere a tọhapụrụ oxytocin na mmụba na dopamine, mgbe mgbidi nke amị amalitere ịmalite nkwekọrịta. N'ezie, oxytocin bụ hormone nke na-ebelata ihe nzuzo nke cortisol nke bụ a maara dị ka hormone nrụgide. Ọtụtụ ndị mmadụ ụbọchị a bi na cortisol dị elu ma nwee nrụgide mgbe niile kwa ụbọchị. Kim Anami na-ekwu, sị: "Oxytocin na-ekwupụta nke a, na-eme ka i nwee afọ ojuju, na-adị jụụ ma na-emekọ ihe ọnụ."
Tụkwasị na nke a, mgbe anyị na-apịkọ ahụ onye anyị na ya na-emekọ ihe mgbe anyị na-enwe mmekọahụ, ọ nwere ike inye anyị ihe mmetụta nke nwere ike iwepụ nchekasị ma kpatara ụdị mgbapụ ime mmụọ. Mana mmetụ ndị a nke nwere ike inye echiche nke enweghị njikwa bụ naanị n'ihi ịhapụ ka ọ laa. "Release hapụ serotonin", na-akọwa Kim Anami, na-akọwa nke ahụ neurotransmitter a na-achịkwa ọnọdụ ma nwee mmetụta antidepressant. Serotonin na-eme gị obi ụtọ, nwee udo ma dịkwa jụụ karị. Na mgbakwunye, ọ na-enyere aka ịkwalite usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ. N'ikpeazụ, n'ime ụmụ nwanyị, mkpali nke etuto ahụ nwere ike iduga otu orgasm. Nkpuru osisi a juputara na ọbara n’oge mkpali ma na-aza aza, tupu o nweghachi ọdịdị o mara mgbe orgasm gachara. Ya mere, obi uto ndi nwanyi na emeputa ntoputa nke obi di n’ime ya ma nye nwanyi ohere inwe obi uto nwa oge. N'oge orgasm, dopamine na oxytocin na-abawanye tupu nwayọọ nwayọọ na-adaba na ịlaghachi na nkịtị.
Isiokwu a pụtara na mbụ https://www.santeplusmag.com/que-se-passe-t-il-dans-notre-cerveau-lorsque-nous-faisons-lamour/
TELES RELAY 56309 posts 1 comments
Turkey: mkpachị nke Besiktas - Hataysport egwuregwu nwere ike imejọ Jean-Claude Billong (vidiyo)